Adịla ụta WordPress | Martech Zone
90,000 hackers na-anwa ịbanye na nwụnye WordPress gị ugbu a. Nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ jọgburu onwe ya mana ọ na-arụtụ aka na ewu ewu nke usoro njikwa ọdịnaya ụwa kachasị ewu ewu. Ọ bụ ezie na anyị amaghị nke ọma banyere sistemụ njikwa ọdịnaya, anyị nwere nkwanye ùgwù miri emi, miri emi maka WordPress ma kwado ọtụtụ nrụnye nke ndị ahịa anyị na ya.
Anaghị m ekwenye na onye guzobere WordPress onye na - egbochi uche na nsogbu nchekwa na CMS. Ezie na ndị folks nwere ike ịgbanwe nbanye nchịkwa ha site na nchịkwa, uru kasịnụ nke WordPress bụ mgbe ịpị 1-click. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ha gbanwee nbanye, nke ahụ karịrị 1 pịa!
Tụkwasị na nke a, enweghị m mmasị na eziokwu na nbanye nbanye bụ ụzọ nzuzo siri ike enweghị ike gbanwee. Ekwenyere m na ọ ga-adị mfe maka WordPress iji kwe ka ụzọ omenala.
Nke ahụ kwuru, ụlọ ọrụ ọ bụla na-ewu ma na-akwado saịtị WordPress nwere ọtụtụ ọrụ na aka ha. Anyị na-akpọ ndị ahịa anyị niile ọbịa Flywheel ebe ọ bụ na ha na-arụ ọrụ dị ịtụnanya nke nlekota maka nchekwa na ịhụ na okwuntughe siri ike. Nakwa, Flywheel chọrọ ka ị jiri otu nbanye dị iche admin mgbe ị na-eke ihe WordPress atụ na ha.
Anyị nwere ndị ahịa ndị ọzọ nwere nsogbu siri ike na WordPress… chinchi, arụmọrụ arụmọrụ, na nchịkwa siri ike. Ihe ndị a niile abụghị nsogbu WordPress, n'agbanyeghị. Ha bụ WordPress Mmepụta mbipụta. Otu n'ime ndị ahịa anyị bụ ikpo okwu ịre ahịa - ha nwekwara ụfọdụ ọdịnaya ahaziri iche na saịtị ha niile. Ndị ụlọ ọrụ ọzọ haziri ya, njikwa akwụkwọ ha dị mfe site na iji ụfọdụ ngalaba ọdịnala dị elu:
iji Uzo Omenala di elu, ndọda Forms na ezigbo isiokwu mmepe, DK New Media enwe ike iwulite ebe niile ị ga - ewe ndị na - arụrụ ọrụ ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ n'enweghị ntụpọ na ndị ọrụ ha kwuru na nlekọta bụ nrọ.
Ebe nrụọrụ WordPress gị na nchekwa WordPress gị dị mma dịka akụrụngwa ọ wuru ma dị ka mmepe nke isiokwu na plugins ị tinyere. Adịla ụta WordPress… chọta onye nrụpụta ọhụụ na ebe ọhụụ iji nọrọ ya!
Tags: acfelu omenala ubiOmenala wordpress gburugburuife efeụdị ndọdandị mmekọ na ihe ịga nke ọmandị mmekọ ọnụ ọgụgụtinderboxwordpress developmentwordpress hackedakwụkwọ ntinye akwụkwọnchekwa nchekwaweta
Mee 3, 2013 na 9: 00 AM
Anyị enweghị ike ịlaghachi azụ na onye nrụpụta nke ikpo okwu wee sị “Ọ bụ gị kpatara nke a mere.”
Ekwenyere m na e nwere ụfọdụ oghere nche nke WP emetụbeghị, m na-amasịkwa 1 pịa wụnye. Agbanyeghị, ọ masịrị m na saịtị echedoro karịa, yabụ m ga-eme nke ahụ. Ihe m mejọrọ bụ na agbanyeghị na m mepụtara akaụntụ nchịkwa uber ọhụrụ na aha njirimara ọhụrụ, anaghị m ehichapụ akaụntụ ochie ha. Nke a kwere ka saịtị m tinye ha.
Ileghara ihe ndị a anya dị mfe n'ihi na anyị tụkwasịrị obi na ndị na-eme nyiwe, mana ọ bụ ọrụ anyị bụ ịbụ ndị nche ọnụ ụzọ nke saịtị anyị. Anyị kwesịrị iwusi alaeze ahụ ike dị ka a pụrụ isi kwuo ya.
Mee 6, 2013 na 3: 43 AM
“Tụkwasị na nke a, enweghị m mmasị na eziokwu na nbanye nbanye bụ ụzọ siri ike na-enweghị ike ịgbanwe. Ekwenyere m na ọ ga-adị nnọọ mfe maka WordPress iji kwe ka ụzọ omenala. ” Enweghị m ike ikwenye gị karịa. Eziokwu ahụ bụ na nbanye nbanye bụ ụzọ siri ike nzuzo - the / wp-admin - na ị nweghị ike ịgbanwe nke ahụ bụ, n'echiche m, na-ebelata ọrụ nke ndị na-agba ọsọ na-achọ ịbanye na blọọgụ gị. Daalụ maka ide edemede a, enwere ọtụtụ ihe nke m kwenyere nke ọma, Douglas.
Mee 8, 2013 na 7: 43 PM
Enwere ngwa mgbakwunye na-enye gị ohere ịgbanwe njikwa na ntinye ụzọ gị:
Mee 8, 2013 na 7: 44 PM
Ahụla m plugins ahụ, mana nke a kwesịrị ịbụ isi ihe nke so na nhazi WordPress.
Jun 16, 2013 na 4: 49 PM
“… Nnukwu uru nke WordPress mgbe niile bụ 1-click ịwụnye”. Naghị ekwu nke ahụ n’ezie, ka ọ̀ bụ eziokwu M KWES agreeR agree ikwenye na isiokwu ndị ọzọ, agbanyeghị, ma kwenyere na ọ dabara na anyị dị ka ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ nnabata na ndị mmepe iji rụọ ọrụ ka mma nke ịchekwa CMS (n'efu) nke mere anyị niile ọtụtụ ego na 10 ikpeazụ. afọ.
Jun 16, 2013 na 10: 26 PM
Ntinye 1-pịa na ịdị mfe nke ndozi bụ ihe mebiri uto nke WordPress. Anaghị m ekwu na nke ahụ bụ naanị uru - enwere ọtụtụ narị. Mana enwere ọtụtụ usoro CMS ndị ọzọ n'efu ebe ahụ na - enweghị ntinye dị mfe nke WordPress mere… mgbe ndị mmadụ enweghị ike ịhazi ha, ha tụbara ha.
Jun 16, 2013 na 11: 31 PM
Enwetara m ihe ị na-ekwu, mana 1-click abụghị atụmatụ WordPress, ọ bụ atụmatụ akaụntụ nnabata. WP ama ama maka nkeji 5 wụnye, ọ bụghị ntinye ya 1-ịwụnye. A 5 nkeji wụnye na-enye gị ohere iji bulie a na aha njirimara kemgbe version 3.0. Ndị usuu nwere ike ịgbanwe WP 1-pịa Wụnye edemede iji mee ka aha njikwa nwekwuo nchebe.
WP agbaala n'ihi na ndị obodo na-akwado ya ruru oke oke, ihe ọzọ CMS emeghị. Mfe nke nrụnye na ndozi na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị mkpa na nke ahụ, mana enwere ọtụtụ ihe nwere mmetụta ka ukwuu karịa nke ahụ (dịka ọbịbịa nke ụdị post post).
Isi ihe ọzọ ị ga-eme bụ na enweghị ndị omekome 90,000 nọ ebe ahụ na-anwa ịbanye n'ime nrụnye WP a ma ama. Nke ahụ bụ ntakịrị nkọwahie. Adreesị 90,000 IP abụghị ihe dịka ndị hackers 90,000, ndị nwere ike ịme ọtụtụ nsogbu karịa botnet.
Na mkpokọta, ekwenyere m n'ihe ị na-ekwu. Anyị ga-eme ihe iji nweta WP ma ọ bụrụ na anyị ga-enye ya dị ka ihe ngwọta nye ndị ahịa anyị. Inweta WP Wụnye gị na ịta ụta na isi ngwaahịa dị ka ịnweta nje na PC gị ma taa ya ụta na enweghị nchekwa Microsoft. Anyị kwesịrị ịkpachara anya ma ọ bụ na anyị ga-ejedebe na nche nhọrọ anyị achọghị kwukwara na isi ngwaahịa.
Jun 25, 2013 na 9:34 AM